Iran: Bilaogera reformista sy mpikatroka voasambotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2019 3:40 GMT
Nosamborina i Mohammad Ali Abtahi, filoha lefitra reformista teo aloha sady mpanolo-tsaina an'i Mehdi Karoubi, kandidà reformista. Nanavao ny bilaoginy isan'andro i Abtahi nandritra ny taona maromaro ary nizara ny heviny mikasika lohahevitra samihafa, anisan'izany ireo raharaha Iraniana.
Indro ny lahatsoratra farany izay navoakan'ny namany tao amin'ny bilaoginy amin'ny fiteny roa, Webneveshteha :
Niantso ny fifidianana ho “hosoka miharihary izy” tao anatin'ny iray tamin'ireo lahatsorany farany:
Nosamborina ihany koa i Somayeh Tohidloo , vehivavy bilaogera reformista. Raha nitombo ny hetsika manohitra ny valim-pifidianana filoham-pirenena Iraniana dia nanohy ny fisamborana ireo mpikatroka ara-politika ireo manampahefana Iraniana. Vao avy nikarakara antsafa tamin'ny Aterineto niaraka tamin'ny filoha teo aloha Mohammad Khatami izy sy ireo bilaogera roa tamin'izay.
Toa hita fa tsy azo nidirana intsony ny bilaoginy .
Mampahafantatra momba ireo bilaogera marobe hafa nosamborina i Mojtaba Saminejad , bilaogera monina ao Iran sady mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona.
Nilaza i Saminejad fa notanana avokoa i Shiva Nazar Ahari, vehivavy bilaogera sady mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, ​​Mehesa Amarabadi, vehivavy bilaogera sady mpanao gazety, Karim Argandehpour, bilaogera sady mpanao gazety malaza ary i Amad Baharvar .